Nei Tichifanira ‘Kuramba Takarinda’? | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mixe (North Central) Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Hamuzivi kuti Ishe wenyu ari kuuya zuva ripi.”—MAT. 24:42.
NZIYO: 136, 129
TINGAITA SEI KUTI TIRAMBE TAKARINDA PASINEI . . .
nezvinodiwa nemuviri wedu une chivi?
1. Tsanangura kuti nei zvichikosha kuti tizive kuti nguva yava papi uye kuti tizive zvinenge zvichiitika patinenge tiri. (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
PATINOONA nguva inenge iri pamaTV ichipera, tinobva taziva kuti inenge yava nguva yekuti tigare pasi tonakidzwa nemimhanzi inoridzwa panotanga chikamu chimwe nechimwe chegungano remunharaunda. Inguva yekuti titeerere takanyarara mimhanzi inonakidza yakaridzwa neWatchtower orchestra, uye chinonyanya kukosha ndechekuti tigadzirire mwoyo nepfungwa kuti tizoteerera hurukuro dzichapiwa. Ko kana vamwe vachinge vasiri kuteerera mimhanzi yacho, vachifamba-famba kana kuti vachitaura neshamwari dzavo, vasingambooni kuti purogiramu yatotanga? Vanenge vatadza kuramba vakarinda kuti vaone kuti yava nguvai uye kuti chii chiri kuitika; sachigaro ava pachikuva, mumhanzi uri kurira, uye vanhu vagara pasi. Muenzaniso uyu wezvinoitika pagungano unotibatsira kunzwisisa kuti nguva yekuti chimwe chiitiko chikuru chitange iri kuswedera pedyo. Chiitiko chipi ichocho?
2. Nei Jesu akaudza vadzidzi vake kuti ‘varambe vakarinda’?
2 Achitaura ‘nezvekuguma kwemamiriro ezvinhu,’ Jesu Kristu akakurudzira vadzidzi vake kuti: “Rambai muchitarira, rambai makamuka, nokuti hamuzivi kuti nguva yakatarwa ichasvika rini.” Apedza kutaura kudaro, Jesu akadzokororazve kuti: “Rambai makarinda.” (Mat. 24:3; verenga Mako 13:32-37.) Nyaya iyi painotaurwa muna Mateu inoratidza kuti Jesu akanyevera vateereri vake kuti varambe vakamuka achiti: “Naizvozvo, rambai makarinda nokuti hamuzivi kuti Ishe wenyu ari kuuya zuva ripi. . . . Ivai vakagadzirira, nokuti Mwanakomana womunhu ari kuuya paawa yamusingafungi kuti ndiyo.” Akataurazve kuti: “Naizvozvo, rambai makarinda nokuti hamuzivi zuva racho kana awa yacho.”—Mat. 24:42-44; 25:13.
3. Nei tichinyatsoteerera nyevero yaJesu?
3 SeZvapupu zvaJehovha, tinonyatsoteerera nyevero yakapiwa naJesu. Tinoziva kuti tiri kurarama ‘munguva yokuguma’ uye kuti pangosara nguva pfupi kuti “kutambudzika kukuru” kutange! (Dhan. 12:4; Mat. 24:21) Pasi rose tiri kuona hondo dzinotyisa chaizvo, kuwedzera kuri kuita unzenza uye kusateerera mutemo, kusaziva kwevanhu manamatiro anofanira kuitwa, kushomeka kwezvokudya, zvirwere, uye kudengenyeka kwenyika. Tinoziva kuti basa rakakura chaizvo rekuparidza nezveUmambo riri kuitwa nevanhu vaJehovha kwose kwose. (Mat. 24:7, 11, 12, 14; Ruka 21:11) Tinotarisira chaizvo kuona zvatichaitirwa naJesu paachauya uye zvaachaita pakuzadzisa chinangwa chaMwari.—Mako 13:26, 27.
NGUVA IRI KUPERA!
4. (a) Nei tichigona kuti parizvino Jesu ava kuziva kuti Amagedhoni ichaitika riini? (b) Kunyange zvazvo tisingazivi kuti kutambudzika kukuru kuchatanga riini, tinogona kuva nechokwadi chei?
4 Tinoziva kuti chikamu chega chega chegungano chinotanga nguvai. Asi chero tikaedza sei, hatimbofi takaziva gore, zuva kana awa pachatanga kutambudzika kukuru. Jesu paaiva panyika, akataura kuti: “Hapana munhu anoziva nezvezuva iroro neawa, kunyange ngirozi dzokumatenga kana Mwanakomana, asi Baba voga.” (Mat. 24:36) Asi Kristu akapiwa simba kudenga kuti arwise nyika yaSatani. (Zvak. 19:11-16) Saka zvine musoro kuti titi iye zvino Jesu ava kuziva kuti Amagedhoni ichatanga riini. Asi isu hatizivi. Zvinokosha chaizvo kuti tirambe takarinda kusvikira kutambudzika kukuru kwatanga. Zvisinei, Jehovha agara achiziva kuti kuchaitika riini. Akatosarudza nguva chaiyoiyo ichauya mugumo. Nguva yekuti kutambudzika kukuru kutange iri kuswedera pedyo, uye kutanga kwacho ‘hakuzononoki!’ (Verenga Habhakuki 2:1-3.) Tingava sei nechokwadi nazvo?
5. Taura muenzaniso unoratidza kuti Jehovha anozadzisa uprofita hwake panguva chaiyo yaanenge asarudza.
5 Uprofita hwaJehovha hwagara huchizadzika panguva chaiyo yaanenge asarudza! Funga nezvemafambisiro aakaita zvinhu nenguva paakanunura vaIsraeri muIjipiti. Mosesi akataura nezvemusi waNisani 14, 1513 B.C.E., achiti: “Pakapera makore mazana mana nemakumi matatu, pazuva iroro mauto ose aJehovha akabuda munyika yeIjipiti.” (Eks. 12:40-42) ‘Makore 430’ iwayo akatanga pakatanga kushanda sungano yakaitwa naJehovha naAbrahamu muna 1943 B.C.E. (VaG. 3:17, 18) Pane imwe nguva, Jehovha akazoudza Abrahamu kuti: “Chokwadi ziva kuti vana vako vachava vatorwa munyika isiri yavo, vachavashandira, uye ivava vachavatambudza kwemakore mazana mana.” (Gen. 15:13; Mab. 7:6) Zviri pachena kuti ‘makore 400’ iwayo ekutambudzwa akatanga muna 1913 B.C.E., Ishmaeri paainyomba Isaka panguva yekurumurwa kwake, uye akapera vaIsraeri pavakabuda muIjipiti muna 1513 B.C.E. (Gen. 21:8-10; VaG. 4:22-29) Saka pachine makore 400, Jehovha akanga atosarudza kare nguva yaaizonunura vanhu vake.
6. Nei tingava nechokwadi chekuti Jehovha achanunura vanhu vake?
6 Joshua, uyo aiva pakati pevanhu vakanunurwa muIjipiti, akayeuchidza vaIsraeri vose kuti: “Munonyatsoziva nemwoyo yenyu yose nemweya yenyu yose kuti hapana kana shoko rimwe chete pamashoko ose akanaka akataurwa naJehovha Mwari wenyu kwamuri rakakundikana. Ose akaitika nokuda kwenyu. Hapana kana shoko rimwe chete rawo rakakundikana.” (Josh. 23:2, 14) Tinogona kuva nechivimbo chekuti vimbiso yaJehovha yekutinunura pakutambudzika kukuru ichatozadzika chete. Zvisinei, kana tichida kupukunyuka pachaparadzwa nyika ino, tinofanira kuramba takarinda.
KUTI TIPONE ZVINODA KUTI TIRAMBE TAKARINDA
7, 8. (a) Murindi aiita basa rei kare, uye izvozvo zvinotidzidzisei? (b) Taura muenzaniso wezvaigona kuitika kana varindi vakarara pabasa.
7 Kubva pane zvakaitika kare, tinogona kuwana chidzidzo chinoratidza kuti zvinokosha kuti tirambe takarinda. Panguva iyoyo, maguta makuru akawanda, akadai seJerusarema, ainge akakomberedzwa nemasvingo marefu. Masvingo acho aidzivirira vanhu kuti vasapambwe uye aiva nenzvimbo dzakakwirira dzaiita kuti varindi vakwanise kuona nharaunda dzakapoteredza. Siku nesikati, varindi vaimira pamusoro pemasvingo acho uye pamagedhi. Vaifanira kuzivisa vanhu vari muguta nezvengozi chero ipi zvayo yaiuya. (Isa. 62:6) Zvaikosha kuti varindi varambe vakamuka uye vakangwarira nokuti vanhu vaigona kuurayiwa.—Ezek. 33:6.
8 Munyori wezvakaitika kare ainzi Josephus akataura kuti muna 70 C.E., masoja eRoma akakwanisa kutora nzvimbo yemasoja evaJudha yainzi Tower of Antonia, yaiva pamasvingo eJerusarema, nokuti varindi vaiva pamagedhi vainge vakarara. Vachibva ipapo, vaRoma vakamhanyira kutemberi vakaipisa nemoto, zvikaita kuti pave nekutambura kwakakura kwainge kusati kwamboitika muJerusarema uye kurudzi rwevaJudha.
9. Chii chisiri kuzivikanwa nevanhu vakawanda mazuva ano?
9 Mazuva ano, nyika dzakawanda dzinorindwa nemasoja anenge ari pamuganhu wenyika uye makamera emhando yepamusoro anobatsira kuona zvinenge zvichiitika. Masoja nemakamera acho anoona vanhu vanopinda munyika zvisiri pamutemo nevavengi vanogona kukanganisa kuchengeteka kwenyika. Asi anongokwanisa chete kuona vanhu uye zvimwe zvinhu zvinotumirwa nedzimwe hurumende. Haazivi nezvehurumende yaMwari yekudenga inotungamirirwa naKristu uye kurwisa kwaichaita hurumende dzese dzepanyika munguva pfupi iri kutevera. (Isa. 9:6, 7; 56:10; Dhan. 2:44) Kana tikaramba takamuka uye takarinda pakunamata, tichange takagadzirira pasinei nekuti zuva rekutongwa richasvika riini.—Pis. 130:6.
NGWARIRA ZVINHU ZVINGAKUTADZISA KURAMBA WAKARINDA
10, 11. (a) Chii chatinofanira kungwarira kuti chisaitika, uye nei? (b) Chii chinokuratidza kuti Dhiyabhorosi ari kupofumadza vanhu kuti vasateerere uprofita hweBhaibheri?
10 Funga nezvemurindi anenge apedza usiku hwese akamuka. Anotanga kunzwa hope uye kuneta kana ava kuda kupedza basa. Saizvozvowo, mugumo zvauri kuramba uchiswedera pedyo, kuramba takamuka kuri kuramba kuchiwedzerawo kuoma. Tinopinda munyatwa kana tikatadza kuramba takamuka. Ngationei zvinhu zvitatu zvekuti kana tikasangwarira zvinogona kutitadzisa kuramba takamuka uye takarinda.
11 Dhiyabhorosi ari kuita kuti vanhu varare pakunamata. Nguva pfupi asati afa, Jesu akanyevera vadzidzi vake katatu ‘nezvemutongi wenyika ino.’ (Joh. 12:31; 14:30; 16:11) Jesu aiziva kuti Dhiyabhorosi aizoita kuti pfungwa dzevanhu dzigare murima kuitira kuti vasaona kuti mugumo wava pedyo sezvinoratidzwa neuprofita hwaMwari. (Zef. 1:14) Satani anopofumadza pfungwa dzevanhu achishandisa zvitendero zvenhema. Zvii zvawakambonzwawo pawaitaura nevanhu? Handizvo here kuti Dhiyabhorosi ‘akatopofumadza pfungwa dzevanhu vasingatendi’ kuti vasaziva nezvekuuya kwemugumo uye kuti Kristu ava kutonga muUmambo hwaMwari? (2 VaK. 4:3-6) Kangani paunosangana nevanhu vasingafariri mashoko atinoparidza? Kakawanda kacho, patinoedza kuvaudza kuti nyika ino yakananga kupi, havaiti hanya nazvo.
12. Nei tisingafaniri kurega Dhiyabhorosi achitinyengera?
12 Kunyange vanhu vakasafarira mashoko akanaka, ramba wakarinda chete. Unoziva kuti zvakakosha. Pauro akanyorera vamwe vatendi achiti: “Imi munonyatsoziva kuti zuva raJehovha riri kuuya,” uye akawedzera kuti, “sezvinonyatsoita mbavha usiku.” (Verenga 1 VaTesaronika 5:1-6.) Jesu akatinyevera kuti: “Rambai makagadzirira, nokuti Mwanakomana womunhu anouya paawa yamusingafungidziri.” (Ruka 12:39, 40) Pasina nguva, Satani achanyengera vanhu vakawanda kuti vafunge kuti nyika yava ‘nerugare nokuchengeteka.’ Achaita kuti vafunge kuti zvinhu zvose zvanaka munyika. Ko isu tichaita sei? Kana ‘tikaramba takamuka uye takasvinura,’ zuva iroro rekutongwa harizouyi takarivara ‘sezvaringaita kumbavha.’ Ndosaka tichifanira kuverenga Shoko raMwari zuva rega rega, tofungisisa zvatiri kuudzwa naJehovha.
13. Mudzimu wenyika uri kukanganisa sei vanhu uye tingaita sei kuti tizvidzivirire?
13 Mudzimu wenyika uri kuita kuti vanhu varare pakunamata. Vakawanda vakabatikana zvakanyanya nezvinhu zvavanoita zuva nezuva zvekuti havazivi “zvinodiwa zvavo zvomudzimu.” (Mat. 5:3) Vari kumhanyidzana nezvinhu zvinokwezva zvenyika zvinokurudzira “kuchiva kwenyama nokuchiva kwemaziso.” (1 Joh. 2:16) Uyewo zvinhu zvinovaraidza zvenyika zviri kukurudzira vanhu kuti ‘vade mafaro,’ uye gore negore zviri kuwedzera kutora vanhu mwoyo. (2 Tim. 3:4) Ndokusaka Pauro akaudza vaKristu kuti ‘vasafanorongera kuchiva kwenyama,’ uko kunoita kuti munhu arare pakunamata.—VaR. 13:11-14.
14. Ruka 21:34, 35 inotinyevera nezvei?
14 Tinoda mudzimu waMwari kwete mudzimu wenyika. Jehovha akashandisa mudzimu wake kutibatsira kunzwisisa zvinhu zvava pedyo kuitika.  (1 VaK. 2:12) Kunyange zvakadaro, tinoziva kuti zvinhu zvakajairika zveupenyu zvinogona kutoita kuti titsimwaire pakunamata kana tikazvirega zvichitora nzvimbo yezvinhu zvekunamata. (Verenga Ruka 21:34, 35.) Vamwe vanogona kutiseka nokuti tinoramba takarinda, asi izvozvo hazvifaniri kuita kuti tione sekuti mugumo uchigere kuuya. (2 Pet. 3:3-7) Pane kudaro, tinofanira kugara tichiwadzana nevamwe vaKristu pamisangano yedu yeungano nokuti panenge paine mudzimu waMwari.
Uri kuita here zvose zvaunogona kuti urambe wakamuka pakunamata?(Ona ndima 11-16)
15. Chii chakaitika kuna Petro, Jakobho naJohani, uye izvozvo zvingaitikawo sei kwatiri?
15 Chivi chatiinacho chinogona kuderedza chido chedu chokuramba takamuka. Jesu aiziva kuti kazhinji vanhu vane chivi vanowanzokurirwa nezvinodiwa nenyama. Chimbofunga zvakaitika usiku hwekupedzisira Jesu asati aurayiwa. Kuti arambe akaperera kuna Baba vake vokudenga, aifanira kuvakumbira kuti vamupe simba. Jesu akaudza Petro, Jakobho naJohani kuti ‘varambe vakarinda’ iye paainyengetera. Kunyange zvakadaro, havana kuona kukosha kwezvavakanga vaudzwa. Pane kuti varambe vakarinda, vakaita zvaidiwa nenyama yavo vakabva varara. Kunyange zvazvo Jesu ainge anetawo, akaramba akamuka achinyengetera nemwoyo wose kuna Baba vake. Ndizvo zvaifanira kunge zvakaitwawo nevadzidzi vake.—Mako 14:32-41.
16. Maererano naRuka 21:36 Jesu akati tinofanira kuita sei kuti ‘tirambe takamuka’?
16 ‘Kuramba takamuka’ hakungogumiri pakuvavarira kuita zvinhu zvakanaka. Mazuva mashomanana Jesu asati aenda nevadzidzi vake mubindu reGetsemane, akavaudza kuti vanyengetere vachiteterera kuna Jehovha. (Verenga Ruka 21:36.) Saka kuti tirambe takamuka pakunamata, nesuwo tinofanira kugara tichinyengetera.—1 Pet. 4:7.
17. Tingava sei nechokwadi chekuti tagadzirira zviri mberi?
17 Sezvo Jesu akati mugumo uchauya ‘paawa yatisingafungi kuti ndiyo,’ ino haisi nguva yokutsimwaira pakunamata, kana yokutsvaga zvinhu zvisina zvazvinobatsira zvinobva kuna Satani nenyika yake uyewo zvinodiwa nenyama yedu. (Mat. 24:44) Mwari naKristu vanoshandisa Bhaibheri kuti vatiudze zvavachatiitira munguva pfupi iri kuuya uye kuti tingaramba sei takamuka. Tinofanira kuongorora kuti kutenda kwedu kwakasimba zvakadini, uye kuti tiri kuisa Umambo pekutanga here. Tinofanira kuziva pava nenguva uye zvinenge zvichiitika kuti tigadzirire zviri mberi. (Zvak. 22:20) Izvozvo ndizvo zvichaita kuti tipone!
^  (ndima 14) Ona chitsauko 21 chebhuku raUmambo hwaMwari Huri Kutonga!